DOWNLOAD MPAMILY HO AN'I HP LASERJET 1000 - MPAMILY - 2019
Raiso ary apetraho ilay mpamily ho an'ny printer HP LaserJet 1000.
Ny mpamily dia programa kely izay ahafahanao mampiasa fitaovana mifandray amin'ny rafitra. Ity lahatsoratra ity dia hifanakalozana ny fomba fandinihana sy fametrahana ny rindrambaiko HP LaserJet 1000 pirinty.
Fikarohana sy fametrahana ny HP Printer Driver LaserJet 1000
Ny fomba fitadiavana sy fametrahana mpamily dia azo zaraina ho tarika roa - manitsy sy semi-automatique. Ny voalohany dia fitsidihana tsy miankina amin'ny tranonkala ofisialy na loharano iray hafa ary ny fampiasana fitaovan'ny fitaovana, ary ny faharoa dia ny fampiasana rindrambaiko manokana.
Fomba 1: Tranonkala ofisialin'ny HP
Ity fomba iray ity dia iray amin'ireo azo itokisana indrindra, satria takiany fotsiny ny fisainan'ny mpampiasa. Mba hanombohana ny dingana dia mila mankany amin'ny pejy ofisialin'ny HP ianao.
Taorian'ilay rohy dia ho tonga any amin'ny fizotran'ny famandrihana mpamily izahay. Eto isika dia mila mifidy ny karazana sy ny version ny rafi-pandaharana izay napetraka ao amin'ny solosaina ary tsindrio "Change".
Push button "Zavatra" eo akaikin'ilay fonosana hita.
Aorian'ny famerenana ny famandrihana dia andramo ny installer. Ao amin'ny fikandrana fanombohana dia misafidy toerana iray mba hamoahana ny rakitra mpamily (afaka mamela ny lalan-drakitra ianao) ary tsindrio "Next".
Fenoy ny fametrahana amin'ny fipihana ny bokotra. "Hamita".
Fomba 2: Fandaharam-pamokarana
Raha mampiasa fitaovana iray na marika HP ianao, dia azonao atao ny mifehy azy ireo amin'ny fanampian'ny rindrambaiko manokana - HP Support Assistant. Ny programa dia ahafahana mampiditra mpamorona (fanavaozana) ho an'ny mpanonta, ankoatra ny zavatra hafa.
Download HP Assistant mpanampy
Atsofeno ny rindrambaiko maimaim-poana sy ao amin'ny tsindry voalohany "Next".
Ekeo ny fepetra fahazoan-dalana amin'ny alàlan'ny fametrahana ny famerenana mankany amin'ny toerana tianao, ary tsindrio indray "Next".
Ao amin'ny varavarankelin'ny fandaharam-potoana, manomboka manamarina ny fanavaozana isika amin'ny fipihana ny rohy voalaza ao amin'ny pikantsary.
Ny fanamarinana dia mitaky fotoana vitsivitsy, ary ny fivoarany dia aseho amin'ny varavarankely iray.
Farany, misafidy ny pirinty ary tsindrio ny bokotra vaovao.
Mariho ny antontan-drakitra ilaina ho an'ny download ary tsindrio "Raiso ary ampidino", aorian'izany dia halefa automatique ny rindrambaiko.
Fomba 3: Fandaharan'asa avy amin'ny mpandraharaha hafa
Eo an-dalan'ny tambajotra manerantany, afaka mahita solontenan'ny rindrambaiko ianao mba hitady fomba sy fametrahana rindrambaiko ho an'ny fitaovana. Ny iray amin'izy ireo dia ny DriverPack Solution.
Jereo koa: Ny fandaharana tsara indrindra amin'ny fametrahana mpamily
Ny rindrambaiko dia mila mandefa sy mihazakazaka ao amin'ny solosainao, aorian'izany dia hijery sy hamoaka lisitr'ireo mpamily izay ilaina. Rehefa mifidy ireo zavatra ilaina, dia manomboha fotsiny ny dingana fametrahana.
Vakio bebe kokoa: Ahoana ny fanavaozana ny mpamily amin'ny solosainao mampiasa DriverPack Solution
Fomba 4: ID Device Hardware
Ny endri-tsoratra rehetra ao anatin'ny rafitra dia omena mari-pamantarana manokana izay ahafahanao mahita ilay mpamily mifanaraka amin'ny fitsidihana ireo loharano manokana ao amin'ny Internet. Amin'izao tranga izao, ny ID dia manana dikany manaraka:
USB VID_03F0 & -PID_0517
Vakio bebe kokoa: Ahoana no ahitanao mpamily amin'ny ID matanjaka
Fomba 5: Tools
Ny famoahana ny dikan-teny rehetra an'ny Windows dia ahitana mpamily fototra ho an'ny fitaovana malaza. Mampalahelo fa amin'ny rafitra vaovao kokoa noho ny Windows XP, ny antontan-drakitra ilaina dia tsy hita, ary ny tompony dia tsy afaka mampiasa io fampianarana io. Ankoatra izany, ny halalin'ny bitika dia tokony ho 32 bit.
Sokafy ny sakafo "Atombohy" ary mandeha amin'ny fitantanana ny printy sy ny faxes.
Tsindrio ny rohy "Mametraka ny fanontam-pirinty".
Ao amin'ny varavarankely misokatra "Mpanamboatra fitaovana fanontam-pirinty" varavarankely, tsindrio ny bokotra "Next".
Eto isika dia esorintsika ny toerana fisavana "Famantarana automatique ary fametrahana ny pirintin'ny PnP" ary manohy ny fametrahana amin'ny bokotra "Next".
Ao amin'ny varavarankely manaraka, alamino ny port izay ho ampiasaina (na efa) ny fitaovana.
Ankehitriny, ao amin'ny tsipika havia, mifidiana ny mpivarotra, raha ny momba azy dia HP, ary eo ankavia - ilay mpamily fototra "HP LaserJet".
Omeo anarana ny anaran'ny mpanonta.
Azonao atao ny manonta pejy fanandramana na mandà ary tsindrio "Next".
Fenoy ny fametrahana ny fitaovana amin'ny alàlan'ny fanindriana "Hatao".
Mariho fa ity fomba fametrahana ity dia hamela anao hampiasa ireo singa fototra amin'ny mpanonta ihany. Raha tsy mifanaraka aminao izany, dia ilaina ny manaraka ireo safidy hafa voalaza etsy ambony.
Araka ny hitanao, dia tsotra ny fitadiavana sy fametrahana mpamily iray ho an'ny HP LaserJet 1000 printer. Ny fitsipika fototra rehefa manaraka ny torolàlana nomena ato amin'ity lahatsoratra ity dia ny mikarakara rehefa mifidy rakitra, satria raha ny fametrahana ny rindrankajy marina, dia azo antoka ny fiasan'ny ordinatera.